Te-hifandray amin’ny Filoha Frantsay Teo Aloha Nicolas Sarkozy? Andramo Antsoina Amin’ny Findainy Amin’ny Anarana, Paul Bismuth Izy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jolay 2014 8:20 GMT
Nicolas Sarkozy nandritra ny vovonana Afrika-Frantsa tao Nice tamin'ny Mey 2010. Sary avy amin'i Tanguy Hughes. Copyright Demotix.
Mankany amin'ny pejy miteny frantsay ny ankamaroan'ny rohy.
Mety mbola tsy nahare izany hoe Paul Bismuth izany ianao, saingy mahafantatra tsara ilay Frantsay mpanao politika mampiasa izany anarana izany ho solon'anarana.
Nifampiantso tamin'ny mpisolovavany, Thierry Herzog tamin'ny fampiasana finday voasoratra amin'ny anarana Paul Bismuth ny filoha Frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy, izay voampanga anatina raharaha kolikoly. Niahiahy – araka ny tokony ho izy- i Herzog fa nanaovan'ny mpitsara tsikilom-pihainoana ny finday manokan'i Sarkozy ikarohana ny famatsiam-bolan'ny fampielezan-kevitr'i Sarkozy nandritra ny fifidiananana filoham-pirenena 2007.
Tamin'izany finday “notazonina ho tsiambaratelo” izany no nandrenesan'ireo mpanadihady an'i Sarkozy sy Herzog fa niresaka ny antsipirihan'ny fizotry ny fanadihadiana momba ny famatsiam-bola tsy ara-dalàna tamin'ny fampielezan-kevitra, nefa tsy fantatr'izy roalahy akory ny fisian'ny tsikilom-pihainoana ny resak'izy ireo.
Noho ireo resaka an-tariby nifanaovana, dia voampanga amin'ny resaka kolikoly sy ny fampiasana fahalalàna olona tamin'ny fomba tsy ara-dalàna (trafic d'influence) i Sarkozy tamin'ny 2 Jolay. Voampanga ho niezaka nanery ilay mpitsara, Gilbert Azibert hanome azy vaovao fanampiny momba ny fizotran'ny raharaha Bettencourt, izay mahakasika fandoavam-bola tsy ara-dalàna nataon'ilay mpandova ny Oréal, Liliane Bettencourt tamin'reo mpikambana ao amin'ny governemanta . Nohadihadiana noho ny izy tafiditra tamin'izany fandoavam-bola izany i Sarkozy, saingy tsy nisy tohiny intsony ny raharaha taty aoriana.
Ankoatra ny fifandraisan'izy ireo izay mbola misy tsikilom-pihainoina azy, nisy ihany koa ny olana hafa mikasika ilay solon'anarana: tsy nangina tao anatin'izany raharaha izany i Paul Bismuth tena izy. Raha nivoaka tamin'ny fiandohan'ity taona ity ny vaovao momba ity raharaha ity, nitory an'i Sarkozy noho ny fangalarana ny mari-panondroana azy i Paul Bismuth, saingy nanaisotra ny fitoriana izy taorian'ny fifanarahana teo aminy sy ireo mpisolovava an'i Sarkozy.
Ahoana marina no tena nahatongavan'i Paul Bismuth, “alter ego”(anarana hafa iantsoana) an'i Sarkozy? Nanadihady ny ekipan'i Nicolas Sarkozy ny fitsarana Frantsay mikasika ireo fanambarana fa nahazo famatsiam-bola tsy ara-dalàna avy amin'ny filoha Lybiana teo aloha Muammar Gaddafi tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2007 ny filoha niasa nandritra ny fe-potoam-piasana voalohany, rahaharam-pitsarana samihafa tanteraka amin'ny raharaha Bettencourt. Mandràra ny famatsiam-bola vahiny amin'ny fampielezan-kevitra politika ny lalàna Frantsay.
Tonga tamin'ny paikady hanoratana ny finday amin'ny anarana Bismuth ny mpisolovavan'i Sarkozy, Herzog. Araka ny filazan'ny Lepoint.fr, nanazava izy hoe, “Natahotra aho, satria mety misy fihainoana mahavanon-doza na tsy ara-dalàna. Ary nataoko izay nahafahako niresaka tamin'i Nicolas Sarkozy mba tsy hisy fihainoana ny resakay, zavatra izay hitako fa rariny ny nanaovako izany”.
Tamin'ny voalohany dia ekipa roa akaikin'i Sarkozy ihany no natao fanadihadiana ary nohainoana ihany koa ny resaka an-telefaonina nifanaovan'izy ireo. Rehefa niroso ny fanadihadiana ary maro ny porofo voangona, nanapa-kevitra hihaino an'i Sarkozy sy ny mpisolovavany Herzog ihany koa ny fitsarana. Ka atao fanadihadiana ihany koa ankehitriny i Herzog.
Mpiara-mianatra amin'i Herzog tahloha i Paul Bismuth tena izy, mpandraharaha momba ny tany aman-trano any Israely. Niara-nianatra tany amin'ny lisea tao Paris ihany koa izy roalahy tamin'ny taona 1970, saingy tsy nifankahita intsony hatreo. Tsy faly tamin'ny fampiasana ny anarany i Bismuth:
Je trouve ça plutôt cavalier, J'ai dit à Herzog que j'étais choqué et étonné par cette pratique, je n'ai pas pris de gants
Hitako fa misy fahasahisahiana ratsy ihany. Nilaza tamin'i Herzog aho fa tohina sy gaga tamin'ny fampiasana ny anarako, tsy nisangy mihitsy aho.
Nilaza ireo mpisolovavan'i Sarkozy fa tsy ara-dalàna ny fihainoana ny resaka an-tariby ny filoha teo aloha, indrindra ao anatin'ny fotoana ifampiresahan'ny mpisolovava sy ny mpanjifany. Temps Réel, bilaogim-baovao Frantsay nanazava fa tsy azo ampisaina ho porofo ny resaka, saingy “tsy misy manakana ireo mpitsara tsy hihaino ny resaka izany.”
Niaro ny tenany tao amin'ny fampahalalam-baovao i Sarkozy mba hanadio ny anarany nipoitra tamin'ny vaovao misongadina sy hamaly ireo fiampangana santatra mivesatra aminy. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, naminavina ny fampahalalam-baovao fa mety mbola hirotsaka hofidiana filoham-pirenena indray i Sarkozy, ary nifamahofaho ny amin'izay hihatra manaraka amin'i Sarkozy manoloana ny fivoaran'ity rahahara ity ny fanadihadian’ny mpanara-baovao.
Ny tsara ho fantarintsika dia na hirotsaka hofidiana i Sarkozy na tsia, dia tsy ho amin'ny alalan'ny solon'anarana Paul Bismuth izany. Toa hita fa tofoky ny olana i Sarkozy tenany manokana raha tsy misy bismuth, singa somary voapoizina rehefa ampiasaina amin'ny tsy tokony izy.